Telo andro ihany ny teny Antanimora : nafindra any amin’ny fonjan’i Manjakandriana i Claudine | NewsMada
Telo andro ihany ny teny Antanimora : nafindra any amin’ny fonjan’i Manjakandriana i Claudine
Nafindra any amin’ny fonja any Manjakandriana, omaly, ny mpandraharaha Razaimamonjy Claudine. Efa tsy eny Antanimora intsony indray izany izao ity tandapa ity, taorian’ny telo andro nihazonana azy teny.
Efa nampoizina ihany. Niala an’Antanimora tokony ho tamin’ny 2 tolakandro, omaly, ity mpandraharaha ity, nentin’ny fiara 4×4, miaraka amin’ny vehivavy mpiandry fonja. Nihazo ny any amin’ny fonjan’i Manjakandriana izany, araka ny nambaran’ny loharanom-baovao eo anivon’ny fonja’Antanimora. “Tokony nahazo alalana amin’ny mpitsara nanao ny famotorana azy izao famindrana toerana azy izao. Misy ny dingana sy ny lalàna, tsy maintsy arahina ao anatin’izany… ”, hoy ny mpahay lalàna iray. Iza izany ny namindra sy nanome alalana tao ambadik’izao ? Nanaraka ny pitsopitson-dalàna avokoa izany ?
Etsy andaniny, efa karazan’ny fanomezana tombony manokana ity tandapa ity izao raha ampitahaina amin’ny fonjan’ny vehivavy etsy Antanimora. Natokana ho an’ny vehivavy “ambonimbony kokoa” ny fonja ao Manjakandriana ary ahitana fitaovana maro sy kojakoja samihafa ny fotodrafitrasa any an-toerana. Midika izany, fa mirona tsikelikely mankany amin’ny fandefasana azy any amin’ny toerana manokana arahi-maso (residence surveillée) any Mantasoa ny raharaha aorian’ny any Manjakandriana ?
Tsy gadra politika sady tsy raharaham-panjakana
Mazava rahateo ny nambaran’ny eo anivon’ny Sendikàn’ny mpitsara (SMM), tamin’ny alalan’ny filoha lefitra, Fanahimanana Tiaray, afakomaly momba izany. “Ny gadra politika ihany no manana zo hazonina amin’ny toerana voatokana arahi-maso fa tsy ny olon-tsotra nanodinkodim-bolam-panjakana. Midika ho tsy fanarahan-dalàna indray raha miditra amin’izany”, hoy izy. Nohizingizininy koa fa tsy tokony homena tombon-dahiny manokana koa io tandapa io satria tsy raharaham-panjakana araka ny nanambaran’ny filoham-pirenena azy, izy ity. Tsy misy idiran’ny resaka politika koa, araka ny nambarany. “Efa nilaza ny fitondram-panjakana fa tsy raharaham-panjakana izao ka tsy tokony hiseho ny fametrahana ity mpandraharaha ity amin’ny toerana voatokana. Tsy tokony hisy koa ny karazan’ny fikarakarana manokana na fanomezana tombony azy raha mitaha amin’ny voafonja rehetra… ”, hoy ihany izy.
Araka izany, andrasana indray ny tohin’izao raharaha izao rehefa nandalo teny amin’ny Bianco sy CPAC 67 ha. Nihazo ny HJRA ary lasa tatsy amin’ny Nosy Maorisy. Niverina teny amin’ny hopitaly ary nalefa eny Antanimora. Any Manjakandriana indray izany izao.
Une réponse à "Telo andro ihany ny teny Antanimora : nafindra any amin’ny fonjan’i Manjakandriana i Claudine"
Rakotoarisoa Maminiaina 16/06/2017 à 13:39
Ny hirariana d mb hitohy hatr@fariny ny tantara.Ho fantatr ny marina!!!!Mikarakara azy fatratra ny fanjakana satry ramatoa Claudine hatahorany hamoaka ny marina reetra.Mrary soa tompoko